यसकारण आफुभन्दा जेठी युवती मनपराउँछन् युवाहरु ! – Jagaran Nepal
यसकारण आफुभन्दा जेठी युवती मनपराउँछन् युवाहरु !
माया एउटा मिठो आभास हो । भनिन्छ मायामा आफैलाई भुल्न पनि धेरै छन् । माया गर्नेहरुको जीवन एकप्रकारको मिठासले भरिएको हुन्छ ।माया बसेपछि उमेरको पनि कुनै महत्व हुदैन । यो कुराको पुष्टि के ले गर्छ भने समाजमा केही यस्ता व्यक्तिहरु रहेका छन् जो आफुभन्दा जेठी महिलाहरुसँग सम्बन्ध गास्न मन पराउँछन्।
पुरुषलाई आफुभन्दा जेठी महिलाहरु मन पराउने कारण भने महिलाहरुको परिपक्कता हो । उनीहरुलाई धेरै कुराको राम्रो ज्ञान हुने भएका कारण पनि पुरुषहरु जेठी महिलाप्रति बढी आकर्षित हुने गर्छन्। आफुभन्दा कान्छी महिलाहरुमा हुने कम परिपक्कताका कारण असमझदारी बढी हुने हुदाँ सम्बन्धमा धेरै बेमेल हुने गर्छ । जेठी महिलाहरु ज्यादा केयरिङ, सम्झौता गर्न सक्ने तथा कुरा बुझ्ने खालका हुन्छन्।
भागदौडको जिन्दगीमा थकान बढी लाग्ने गर्छ । तर यस्ता कुराहरु ह्याण्डल गर्न परिपक्कता भएका महिलाहरु सफल हुन्छन् । पुरुषहरुलाई भावानात्मक सहयोग दिनमा उनीहरु खपिप्स हुन्छन् । इमोशनल कुराहरुदेखि आर्थिक कुराहरुमा पनि उनीहरु सन्तुलन गरेर अगाडि बढ्न मदत गर्छन् ।त्यस्तै सेक्स लाइफमा पनि उनीहरु त्यत्तिकै परिपक्कता रहेका हुन्छन् । यही कारण पनि पुरुषहरु आफुभन्दा जेठी महिलाहरु बढी मन पराउँछन्।